Ike wee gwụ Android na ugbu a na-awụlikwa elu mmiri iji iOS? Ịmafe si gam akporo ka iOS bụ oké ihe ịma aka, mgbe niile, ọ bụghị ihe dị mfe nyefee faịlụ n'etiti abụọ kpamkpam dị iche iche nyiwe. -Ewute? Jiri ya nwayọọ. Ebe a bụ ndị pụrụ iche akụ na-enyere gi aka jikwaa nyefee kọntaktị, music, videos, photos, ederede ozi, ngwa ọdịnala na kalenda gị ochie Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka iOS ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla hassle.
Free Ngwọta MobileTrans (A ugwo ngwá ọrụ)
Ndi ana-akpo Mmekọrịta kọntaktị na Google / iCloud
Kalenda Mmekọrịta kalenda na Google
SMS Ọ dịghị ụzọ dị
Music / Video / Photos Mmekọrịta media na iTunes
Ngwa Download na iTunes App ụlọ ahịa Adịghị akwado
Uru & cons
Kpam kpam free
Dị nnọọ na a nkeji ole na ole
Nyefee kọntaktị niile, music, videos, foto & SMS n'out oge na 1 Pịa.
Were otu ma ọ bụ ụbọchị abụọ na-eme search ọrụ na faịlụ transfer
Naanị nyefee otu ma ọ bụ abụọ iche iche nke faịlụ na oge
Ụfọdụ ngwọta ada ada na-arụ ọrụ
Ọ bụghị free. Mkpa iji kwụọ ụgwọ.
-Enweghị ike ịgagharị ngwa
Ngwọta 1: Nyefee kọntaktị, kalenda, ngwa & media faịlụ maka free
Ngwọta 2: Gbanwee ọdịnaya si gam akporo ka iOS na MobileTrans
Ngwọta 1: Nyefee kọntaktị, kalenda, ngwa & media maka free
1. Nyefee na kọntaktị na kalenda si gam akporo ka iOS ngwaọrụ
Method 1. mmekọrịta Android na iOS ngwaọrụ Gmail na kọntaktị na kalenda
Ụfọdụ gam akporo igwe ọnụọgụgụ Google mmekọrịta, nke-enye gị ohere mmekọrịta gị Android kọntaktị na Google akaụntụ na mgbe ahụ mmekọrịta Google akaụntụ na gị iPhone.
Na gị Android ekwentị, mgbata Isetịpụ> Accounts & mmekọrịta. Chọta Gmail na-abanye na gị Gmail akaụntụ.
Enweta mmekọrịta Ndi ana-akpo na mmekọrịta kalenda.
Enweta mmekọrịta Ugbu a ka mmekọrịta ndị gmail na kọntaktị na calenadrs na gị Android ekwentị.
Ugbu a, ihe niile na kọntaktị na kalenda gị gam akporo ekwentị na-zigara gị Google akaụntụ.
Na gị iOS ngwaọrụ-agba ọsọ iOS 7, mgbata Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ> Google.
Input aha, email, paswọọdụ na nkọwa. Mgbe ahụ, gbanye kalenda na Ndi ana-akpo ka mmekọrịta gị iPhone.
Pịa ebe a ịmụta otú mmekọrịta Google kọntaktị mgbe gị iOS ngwaọrụ na-agba ọsọ iOS 5 ma ọ bụ 6.
Method 2. Bulite Android VCF faịlụ ka Gmail ma ọ bụ iCloud
Ọ bụghị ihe niile Android igwe na-onwem na Gmail mmekọrịta atụmatụ. Gịnị ka ị pụrụ ime mgbe gị Android ekwentị adịghị ekwe ka ị ka mmekọrịta na Gmail? Ebe a na-aga nzọụkwụ.
Chọta Import / Export na họrọ Export ka USB nchekwa. Site ndabara, VCF faịlụ a ga-aha dị ka 00001.vcf.
Enweta mmekọrịta Ndi ana-akpo. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka mmekọrịta kalenda, dị nnọọ enweta mmekọrịta kalenda.
Ikwunye na Android eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa. Mgbe gị Android SD kaadị gosiri dị ka a USB mbanye, na-emeghe ya na-ahụ VCF faịlụ.
Abanye n'ime gị Gmail akaụntụ ahụ na internet. Mgbe ahụ, pịa triangle esote Gmail. Na dobe ala menu, họrọ Ndi ana-akpo.
Pịa More> Bubata ...> Họrọ File. Ịnyagharịa ka VCF faịlụ na pịa Open bulite ya. Mgbe ahụ, pịa Import mbubata gị Android kọntaktị gị Gmail akaụntụ.
Emeghe gị iPhone na mmekọrịta gmail kọntaktị gị iPhone.
E wezụga Gmail, ị nwekwara ike bulite VCF ka iCloud.
Mbụ 3 nzọụkwụ bụ otu dị n'elu ka.
Banye na gị iCloud akaụntụ na www.cloud.com.
Pịa Ndi ana-akpo na-aga na ala-n'akụkụ aka ekpe pịa menu taabụ.
Họrọ Import vCard. A nchọgharị Pop elu. Chọta VCF faịlụ na mbubata ka iCloud.
Enweta Ntọala na gị iPhone na enweta iCloud ka imput gị iCloud akaụntụ na paswọọdụ.
Mgbe ahụ, na-aga Ndi ana-akpo ngwa na ego na kọntaktị.
2. mmekọrịta music, foto na vidiyo si gam akporo ka iOS site iTunes
Tụnyere ndị Android ka iOS kọntaktị transfer, usoro mgbasa ozi transfer amama-adị mfe. Soro mfe nkuzi n'okpuru:
Jikọọ gị android ngwaọrụ na kọmputa na eriri USB.
Mepee Android SD kaadị nchekwa ma mbupụ gị chọrọ songs, videos na foto na kọmputa.
Ẹkedori iTunes. Pịa File> Tinye File ka Library ... mbubata Android music na vidiyo na iTunes Library.
Pịa gị iPhone mgbe ọ gosiri n'okpuru NGWAỌRỤ. Mgbe ahụ, na nri panel, pịa Photos, Music, Movies wdg ka mmekọrịta gam akporo media faịlụ gị iPhone.
3. Download otu ngwa ọdịnala na App ụlọ ahịa
Migrating ngwa site Android ka iOS bụ a siri ike ọrụ, n'ihi na ha dị iche iche na-eji ngwa formats. Otú ọ dị, e nwere ka otu ụzọ i nwere ike ịgbalị, bu, na nbudata otu ngwa ọdịnala si iTunes ngwa ahịa.
Gịnị banyere ngwa ọdịnala na ị zụta si Google Play ahịa ma ọ bụ ndị ọzọ? Na nke a, ị ga-mma ịkpọ ha ahịa ọrụ center ịjụ ma ị nwere ike akwagakwa si Android version ka iOS enyi na enyi onye ahụ.
Ọtụtụ free ngwọta dị ka e nwere, otu eziokwu i nwere na-enwe bụ na ọ bụ a na-ewe oge na tedious ọrụ. Ụfọdụ free ngwọta dị nnọọ ike ga-eji na ụfọdụ Android igwe na mbadamba. Ka njọ, ụfọdụ music na video faịlụ, dị ka AAC, OGG, MP2, na-egwu ọma na gị android ngwaọrụ, ka anaghị akwado na iOS ngwaọrụ. Ihe ndị a niile nwere ike ka ala.
Ngwọta 2: 1 Pịa nyefee kọntaktị, videos, kalenda, music, ozi na foto site na Android ka iOS na MobileTrans
Chọrọ nyefee ihe niile si Android ka iOS ịdị uchu na na ala? Gbalịa mee ihe ndị Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. E dị ka a ọkachamara ekwentị transfer ngwá ọrụ, ọ na-enye gị nyefee kọntaktị niile ma na gị Android ekwentị na ígwé ojii, music, videos, kalenda, foto na ozi ederede site na android ngwaọrụ ka iOS ngwaọrụ na otu click. Mgbe MobileTrans na-achọpụta rụọ music na vidiyo nwere ike ghara egwuri na gị iOS ngwaọrụ, ya ọbụna na-akpaghị aka tọghata ha ka ha iOS dakọtara n'anya.
Download free ikpe version nke Wondershare MobileTrans. Mgbe ahụ, na-eso mfe nkuzi na Windows version. The Mac version na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android na iOS ngwaọrụ na kọmputa
Ẹkedori Wondershare MobileTrans na jikọọ ma Android na ngwaọrụ ma iOS ngwaọrụ na kọmputa site na eriri cables. Cheta na iTunes mkpa na-arụnyere-ekwe nkwa faịlụ nyefe.
Cheta na: The Wondershare MobileTrans bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS ngwaọrụ-agba ọsọ iOS 5/6/7/8/9, na otutu Android ngwaọrụ, dị ka Samsung, LG, HTC, Sony, Motorola, Huawei. Ọzọ ebe a >>
Nzọụkwụ 2. kwapụ Android ka iOS
Mgbe ngwaọrụ abụọ jikọọ, faịlụ niile nwere ike zigara na-ticked. Mgbe ahụ, na-amalite faịlụ transfer site na ịpị Malite Detuo.
iPhone VS Android: nke onye ị na-achọ mma?
Best iOS Photo onyenlereanya Ka ilele foto na iOS Devices
> Resource> iOS> Olee ka ịgbanwee si gam akporo ka iOS